Shiinaha 900KG, 1Ton Box Magnets For Precast Tilting Table Mold Fixing saarayaasha iyo alaabada | Meiko Magnetics
900KG, 1Ton Box Magnetka Loogu Talagalay Shaxda Jilicsan ee Qaab-dhismeedka Miiska
900KG Sanduuqa Magnetic Shuttering waa nidaam caan ah oo magnetic ah oo loogu talagalay soosaarida darbiga derbiga, labadaba alwaax iyo bir caarya ah, oo ka kooban qolofka sanduuqa kaarboon iyo nidaam magnetic neodymium ah.
900KG Box Magnet waa cabbirka sanduuqa magnetic-ka ee qaab-dhismeedka precast, labadaba alwaax iyo bir caarya ah, oo ka kooban qolof kaarboon kaarboon iyo qaab magnet dhulka neodymium naadir ah.
Waa la dhaqaajin karaa iyadoo si fudud hoos loogu riixayo badhanka gacanta ama cagta. Si loo baabi'iyo, magnets-ka waxaa si fudud u sii daayay lever bir ah (si uu u jiido batoonka). Meesha aan firfircooneyn, magnets magnetka ayaa si fudud looga saari karaa foomka miiska. Magnets la taaban karo precast loo isticmaali karaa keligiis ama ku xiran adpator si loo hagaajiyo qaab. Caadi ahaan 900Kg sanduuqa xoogga ee sanduuqa toosan ayaa si fiican ugu habboon soosaarka darbiga dhumucdiisuna tahay 60-90mm.
FAA'IIDOOYINKA MUHIIMKA AH EE SOO JOOJINTA SHARCIYADA:
1. Yaraynta kakanaanta iyo waqtiga rakibidda qaab dhismeedka (illaa 70%).
2. Adeegsiga guud ee wax soo saarka ballaaran ee wax soo saarka la taaban karo, iyo wax soo saarka noocyada kala duwan ee miis isku bir ah.
3. Waxay baabi'isaa baahida loo qabo alxamida, birlabaynta mashiinnada waxyeello kuma gaadho miiska birta.
4. Waxay suurtogal ka dhigaysaa in la soo saaro alaab shucaac ah. Foomka Shuttering Magnet ee dhirta Precast
5. Qiimo yar oo set oo magnet ah. Celceliska celceliska ilaa 3 bilood.
6. Faa'iidada ugu weyn ee birlabyada wax lagu shubo ayaa ah inaadan u baahnayn foomam fara badan oo kaladuwan oo alaabooyin kala duwan ah, waxaad u baahan tahay inaad haysato qaybo magnetyo ah, adabtarada looxyo kala duwan oo dherer ah iyo miis bir ah. Precast Shidaal Shidaal Magnet Sanduuqa 900kg
Nooca L W H Ku marooji Xoog WG
Anaga, Meiko Magnetics, waxay xirfad ku leeyihiin dhammaan noocyada xalalka magnetka ee warshadaha la taaban karo ee precast. Waxaad ka heli kartaa dhammaan shuruudahaaga caadiga ah ama nidaamka magnetka loo habeeyay halkan si loo sii dejiyo.
Hore: 450KG Box Magnet oo leh Button Riixitaan
Xiga: 1350KG, 1500KG Nooca Nidaamka Magnetic Formwork
1000KG Sanduuqa Magnet
1Ton Awoodda Magnet Box
900KG Button Magnet
900KG Awoodda Magnet La taaban karo
900Kg Nidaamka Qaabaynta Magnetic
900KG Magnet Magacyo Gaaban
900Kg Magnet Xiritaanka
450KG Box Magnet oo leh Button Riixitaan